सात कामहरू : २५ वर्ष हुनु भन्दा पहीले छनोट गर्दा सफलता मिल्ने - kageshworikhabar.com
सात कामहरू : २५ वर्ष हुनु भन्दा पहीले छनोट गर्दा सफलता मिल्ने
एजेन्सी । पेशा छनौट गर्नु सबैको जीवनको महत्त्वपूर्ण चरण हो। यस छनोटले तपाईंको सम्पूर्ण भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ, र यसको लागि विशेष दृष्टिकोण र गहन अनुसन्धान आवश्यक पर्दछ। जब तपाईं जवान हुनुहुन्छ, तपाईं बर्षैसम्म एउटा कोठामा सिमीत हुने जागिरमा पस्न चाहनुहुन्न, हैन? र अर्को तर्फ, राम्रो तलब पनि एक युवाका लागि कामको निर्धारण कारक हो।
तपार्इको सही आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामी तपाईंलाई सात उत्तम रोजगारीहरूको वारेमा वताउदैछौँ। जसले तपार्इ जिवनमा सफलता र आनन्द दुबै दिनसक्छ।
श्रिङ्गारकर्ताको काम भनेको प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको मुहारको अनावसेकतालार्इ हटाइदिने र क्यामेराको अगाडी जानको लागि उनीहरूलाई तयार पार्नु हो। हाल, मानीसहरू सानो कार्यक्रममा सहभागीहुनका लागी पनी मुहारको श्रिङ्गार गर्ने चलन चली सकेको छ। श्रिङ्गारकर्ता शोबिजनेसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्ये एक हो। मेकअप कलाकार र सौंदर्यविज्ञानीहरुले हजारौं कमाई गर्दैछन्। यो केवल तिनीहरूको शैली र शिल्प कौशलको लागी गरीने शीर्ष-खर्च हो। तपाईं आफैले वा तपाईंको परिवारका सदस्यहरूमा श्रिङ्गारकर्ताको अभ्यास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि ती नयाँ प्राप्त भएका सीपहरूमा पोख्त हुन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त गर्नुहोस् र धमाधम पैसा कमाउनुहोस।
यो अनौंठो लाग्न सक्छ, तर लुगा डिजाइन गर्नु त्यति गाह्रो छैन। तपाईले गर्नुपर्ने सबै धेरै प्रयास छन्, जसमा तपार्इले धेरै केरकार गर्नु पर्छ र तपाईका प्रोजेक्टहरूको लागि कलपनासिल हुनुपर्छ चाहे त्यो जेसुकै होस। लुगाको पकेट, त्यहाँ फ्ल्याप, केहि लाइनहरू थप्नुहोस्, र तपाईंले आफैंको लागि नयाँ डिजाईन पाउनुहुन्छ। अब यसलाई पुन: चित्रण गर्नुहोस्, केहि थप परिवर्तन गर्नुहोस्, केही थप्नुहोस् र तपाईंले यो फेशन डिजाइनरको जस्तो पाउनुहुनेछ। स्वाभाविक रूपमा, कसैले पनि तपाईंको स्केचहरू हेर्न चाहँदैन, तर निरन्तर्ता दिनुहोस। यसलार्इ तपाई रमाईलो मानी राख्नुहोस्। तपार्इ फेसबुक पृष्ठमा वा सायद इन्स्ट्राग्रमबाट अाफ्नो काम देखाउन सुरु गर्नुहोस्, र यदि तपाईं राम्रो देखिएको हुनुहुन्छ भने, गर्वसाथ तपाई त्यो लुगा सिर्जना गरी आफ्नै शरीरमा पहिरीनुहोस। निरन्तर्तानै यो कामको सफलता हो।
विशेष गरी अाजकाल सबैले आ-आफ्नो पकेटमा अर्ध-पेशेवर क्यामेरा बोक्छन्। यसकारण पनी यो राम्रो र सजिलो पेसा भएकोछ। तपाईं राम्रो क्यमरा बाट कहिले पनि गल्ती गर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईंसँग सही उपकरणहरू हुन्छन्, राम्रो शट लिनको लागि तपाइलार्इ गारो पर्दैन। अवश्य, केहि टेक्निकलटीहरू छन्। जस्तै तपाईको क्यामेरा र रंग सुधारको सेटअप, तर यो मिलाउनु सामान्यतया धेरै रमाइलो र आकर्षक प्रयास हो।
बिषेश गरी महीलाहरूको लागी यो राम्रो पेसा हुन सक्छ र पुरूषको लागी पनि। यदि तपाईं उडानबाट डराउनुहुन्न र संसारलाई हेर्न मनपराउनु हुन्छ। हुनसक्छ, यस पेशालाई प्रयास गर्नुहोस्। धेरै जसो समय तपाई ठीक हुनुहुन्छ, तर तपाई सबैका लागि तयार हुनु पर्छ: पागल यात्रीहरू, मतवाला यात्रीहरू, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, केटाकेटीहरू जो रून छोड्दैनन्। यसको लागी तलब पनि राम्रो पाइन्छ।
तपाईंले याद गर्नु भएको छ कि यो पेशा पछिल्लो दुई वर्ष देखी उच्च मागमा छ। आज व्यक्तिहरूले कार र फर्नीचरका थ्रीडी मोडेलदेखि ट्विच ईमोटहरू र वेब साइटहरूमा कुनै पनि चीज डिजाइन गर्न सक्दछन्, त्यसैले यदि तपाईं फोटोशपको साथमा राम्रो हुनुहुन्छ भने, यसमा लाग्दा राम्रो हुन्छ। यो तपाईंको अाय बडाउने राम्रो स्रोत हुन सक्छ।
छिटैने यो लकडाउन पछी धेरै मान्छहरू छोटो वा लामो यात्रा गर्ने छन्। उनीहरू अहीले जाँहा छन् त्यो ठाँउबाट टाढा रहन चाहने छन्। उनीहरुलाई उनीहरूले चाहेको ठाँउमा छोडिदिन सक्नुहुन्छ, र उनीहरुको आफ्नो गन्तव्य छान्नका लागि सहयोगी हुनुहुनेछ। यो काम एकदम सजिलो छ र मैत्री, धैर्य, र कहिलेकाँही केहि अलि दृण रहनु भन्दा अरु बढी आवश्यक पर्दैन। सुरुमा तलब त्यति ठूलो नहुन सक्छ, तर मानिससँग काम गर्दै जादा तपाईंको अामदानी थप राम्रो हुनसक्छ।
सारंस वा सामाग्री निर्माता
हाल युट्युब, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका लागी यो काम सिक्नु, उत्तम समय हो। सारंस सिर्जनाकर्ताहरू आजका दिनमा धेरै छन्, जसमा तिनीहरूमध्ये धेरैले राम्रो गरिरहेको देखिन्छ, हजारौं डलर कमाई राखेका छन् । यो गेम हुन सक्दछ, संगीत बनाउँदै, चित्र बनाउँदै, अनलाइन संसार तपाईंको सफलताको डुङ्गा हो। केवल याद गर्नुहोस् कि चीजहरू रोलिंग गर्न यसले समय लिन्छ। कसले जान्न सक्छ, हुनसक्छ तपाईं अर्को पिउ-डार्इ-पर्इ वा भल्कीरेइ बन्नुहुन्छ। तपाई जे पनि गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई सफलताको शुभकामना दिन्छौं!
Previous articleअब आम सार्वसाधारणलाई पनि खोप दिइने
Next articleचामुण्डाविन्द्रासैनी पछिल्लो समय समृद्धितिर